Joshua 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kuchecheudza vanhu paGirigari (1-9)
Kuchengetwa kwePaseka; kuguma kwemana (10-12)
Mukuru weuto raJehovha (13-15)
5 Madzimambo ese evaAmori+ aiva kumavirira kwaJodhani, nemadzimambo ese evaKenani+ aiva pedyo negungwa, paakangonzwa kuti Jehovha akanga aomesa mvura yaJodhani pamberi pevaIsraeri kusvikira vayambuka, akatanga kutya,+ uye akanga asisina ushingi* nemhaka yevaIsraeri.+ 2 Panguva iyoyo Jehovha akati kuna Joshua: “Gadzira mapanga uchishandisa dombo rakaomarara, uchecheudze+ varume vechiIsraeri kechipiri.” 3 Saka Joshua akagadzira mapanga achishandisa dombo rakaomarara, akachecheudza varume vechiIsraeri paGibhiyati-haararoti.*+ 4 Joshua akavachecheudza nekuti varume vese vakabva kuIjipiti, ivo varume vese vehondo,* vainge vafira murenje vari parwendo, pashure pekunge vabva kuIjipiti.+ 5 Vanhu vese vakabva kuIjipiti vakanga vachecheudzwa, asi vanhu vese vakaberekerwa murenje parwendo rwekubva kuIjipiti vakanga vasina kuchecheudzwa. 6 VaIsraeri vakanga vafamba murenje kwemakore 40,+ kusvikira chizvarwa chacho chese chapera kufa, kureva varume vese vehondo vakabva kuIjipiti vasina kuteerera inzwi raJehovha.+ Jehovha akapika kwavari kuti aisazomboita kuti vaone nyika+ yakanga yapikirwa madzitateguru avo naJehovha kuti atipe,+ nyika inoyerera uchi nemukaka.+ 7 Saka akaita kuti vanakomana vavo vatore nzvimbo yavo.+ Ava ndivo vakachecheudzwa naJoshua. Vakanga vasina kuchecheudzwa nekuti pavaiva parwendo havana kunge vavachecheudza. 8 Pavakapedza kuchecheudza rudzi rwacho rwese, vakaramba vari pavakanga vari mumusasa kusvikira vapora. 9 Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Nhasi ndabvisa kushora kweIjipiti pamuri.” Saka nzvimbo iyoyo yakapiwa zita rekuti Girigari*+ uye nanhasi ndiro zita rayo. 10 VaIsraeri vakaramba vakadzika musasa paGirigari, uye vakachengeta Paseka pazuva rechi14 remwedzi wacho,+ ari manheru, murenje riri pedyo neJeriko. 11 Vakatanga kudya zvibereko zvenyika yacho zuva rakatevera Paseka. Pazuva iroro vakadya chingwa chisina mbiriso+ nezviyo zvakakangwa. 12 Mana yakabva yaguma pazuva iroro, pavakanga vadya zvimwe zvibereko zvenyika yacho; vaIsraeri havana kuzowana mana zvakare,+ asi vakatanga kudya zvibereko zvenyika yeKenani gore iroro.+ 13 Joshua paakanga ari pedyo neJeriko, akasimudza musoro ndokuona mumwe murume+ akamira pamberi pake, akabata bakatwa rakavhomorwa.+ Joshua akafamba achienda kwaaiva akati kwaari: “Uri mumwe wedu here kana kuti uri mumwe wevavengi vedu?” 14 Iye akati: “Aiwa, ndauya semukuru weuto raJehovha.”+ Joshua akabva apfugama, akadzikisa musoro wake, akati kwaari: “Ishe wangu ane shoko rekuti chii kumuranda wake?” 15 Mukuru weuto raJehovha akati kuna Joshua: “Bvisa shangu dzako, nekuti nzvimbo yaumire itsvene.” Joshua akabva aita saizvozvo.+
^ ChiHeb., “akanga asisina mweya maari.”
^ Kureva kuti, “Chikomo cheZvikanda Zvepamberi.”
^ Kana kuti “varume vese vaiva pazera rekuenda kuhondo.”
^ Kureva kuti, “Kukungurutsa; Kukungurutsa Uchibvisa.”